Global Tourism Forum Inonzwa nezveKudiwa Kwekuonekwa muNew Normal
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Global Tourism Forum Inonzwa nezveKudiwa Kwekuonekwa muNew Normal
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Indonesia Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • Sustainability News • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Wtn
Global Tourism foramu
Iyo chaiyo Global Tourism foramu (GTF) yapera nhasi, Gunyana 16, 2021, muJakarta, Indonesia. Chiitiko ichi chakaunza pamwechete vatungamiriri vezvikamu kubva pasirese kupanana mazano pamamiriro azvino ezvinhu mukushanya nekugamuchira vaeni.
Mutungamiri weAfrican Tourism Board, Alain St. Angle akasimbisa kuGlobal Tourism Forum muJakarta, kuti kushanya kunoda rutsigiro mune zvematongerwo enyika sezvo izvi zvichiramba zviri musimboti webhizimusi.
Vakati Hurumende yeIndonesia ine mikana yakawanda yekushanya uye nyika inofanirwa kushandisa zvese zvavanogona kuti vawedzere kuoneka.
St Ange akataura kuti mune nyowani nyowani COVID zvakajairwa, zvakakosha kuti uzive kuti kwese kushanya kwekuenda kwaizove kuredza kubva mugungwa rimwe chete.
Alain St. Ang African Tourism Bhodhi (ATB) uye nhengo yekutanga ye World Kufamba Network (WTN), nezuro akataura kuGlobal Tourism Forum yanga ichiitirwa muJakarta kuIndonesia.
Kero yeSt Ange, sechikamu chemusangano wekukurukurirana, yainge yakamirirwa kwazvo mu Africa sezvo aizivikanwa kunge anga achikurudzira kuwedzera kwehukama hwekutengeserana nekushanya pakati pe Africa neASEAN Block. Alain St. Ang
St. Ange, nhengo yebhodhi zvakare yeiyo ichangoburwa World Tourism Network iri kushanda kuti iwedzere kuoneka kwenzvimbo dzekushanya uye kupa izwi risingapfuure kumabhizimusi madiki nepakati nepakati uye epamabhizimusi ekushanya kutenderera pasirese izvo Zvinoshamisika kunzwa nezvekufarira kubva kukondinendi nezve kero yake.
St.ngenge vakatanga nekusimbisa kuti kushanya kunoda rutsigiro mune zvematongerwo enyika sezvo izvozvo zvichiri zvakakosha mukubudirira kweindasitiri iyi sezvavakakorokotedza Mutevedzeri weMutungamiriri uye Gurukota rezveKushanya kuti vese varipo pane ino shanduro ye World Tourism foramu. Akaenderera mberi achimanikidza sezvaaiyeuchidza Hurumende yeIndonesia nezve mikana yakawanda yekushanya Indonesia yakakomborerwa nazvo, asi akati "mikana yakadaro uye mari mukuzvigadzira zvingatambiswa kana Indonesia ikasashandisa zvese zvainazvo kuwedzera kuoneka kwe Nyika."
Alain St. Angese akataurawo kuti mune yakasarudzika nyowani uye se post-COVID iri kukurukurwa, zvaive zvakakosha kuti uzive kuti kwese kushanya kwekuenda kwaizove kuredza kubva mugungwa rimwe chete kune vashanyi vavo vanonzwisisa uye kuti nzvimbo ine hunyanzvi uye yakagadzirirwa yaizoiswa zvirinani kutambira post-COVID kutengeserana.
St. Challenges akataura nezve misika yemisika kubva kune yechinyakare kuenda kune agro-kushanya, kushanya kwezvechitendero, kushanya kwemitambo, kushanya halal, nezvimwewo, achiti dombo rega rega rinofanirwa kushandurwa mukutsvaga misika mitsva yekushanya.
Akaita nguva achitsanangudza nezve kukosha kwekumisikidza kosi yenyika uye nekuzadzikisa mutengo unoenderana nebasa, achifunga kuti nyika ndiyo kwairi kuenda uye kuti nyika yaida kugadzirirwa pamberi pemumwe munhu kubva kuchikwata akasimbisa kuti "famba hurukuro ”zvino yakanga yava kukosha kupfuura nakare kose.
Vaimbove Gurukota vakaratidza kukosha kwekubatanidza masimba pamwe nevavakidzani neshamwari uye vakadoma Africa neAfrican Tourism Board semuenzaniso wekondinendi inoda indasitiri yayo yekushanya uye kubuda zvese kuti iite kuti ishande.
Global Tourism Forum 2021 yakaona Vatevedzeri VeMutungamiri veIndonesia uye vaimbova Mutungamiriri weUK pamwe naDr Taleb Rifai, aimbova Secretary-General weUNWTO, uye iyezvino uye aimbova Gurukota rezveKushanya muIndonesia vese vakanyorwa pamwe neMutungamiri iyo Global Tourism foramu.